ဖက်ရှင်ဖိနပ် - ထိုလမ်းကြောင်းသစ်, နွေရာသီ, ရော်ဘာ, Demi, အားကစား, တစ်ဖနောင့်ခြင်းမရှိဘဲ, ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးအပြည့်အဝခြေလျင်တစ်ပလက်ဖောင်းဝါး, ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်, beachwear, ပေါ့ပေါ့
အမျိုးသမီးဖက်ရှင်ဖိနပ်များ၏တည်ထောင်ခြင်းအလွန်မကြာခဏအရေးပါ look'ov ။ တင့်တယ်ခြင်းနှင့်ကြော့ဖိနပ်လုံးဝကပိုမိုမြင့်မား, ပါးလျနှင့်ပိုပြီးကြော့စေနှင့်အခြားသူများဖက်ရှင်မင်းသမီးခံစားရနှင့်ပုံရိပ်၏သင့်လျော်သောဒြပ်စင်များရွေးချယ်ဖို့စွမ်းရည်သရုပ်ပြရန်၎င်း၏အမွေခံရသောသူကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဖိနပ် 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
အသစ်ကဖက်ရှင်ရာသီထွန်းနှင့်အတူဖိနပ်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုဂန္ထုတ်ကုန်လူကြိုက်များထိပ်ပေါ်မှာအမြဲဒေသများဒီဇိုင်နာများနှင့် stylist လေ့အဘယ်အရာကိုမျှမကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးအများဆုံးပုံစံအားလုံးနီးပါးဘာသာရပ်များဗီရိုတရားရုံးဖိနပ်များအတွက်သင့်လျော်သောသားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့နွေရာသီဖိနပ်တစ်လောကလုံးအမျိုးအနွယ်ကိုအိုး, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအလိမ်းမော်ဒယ်များကိုသာကိုယ်စားပြုသည်။ ဒါကြောင့်ယခုရာသီယောက်ျားရဲ့ပေါ့ပါးပြီးအဆင်ပြေဖိနပ်-slipony အမျိုးမျိုးသောဖနောငျ့ဂျီသြမေတြီနှင့်ဖန်စီပုံစံမျိုးစုံအပေါ် options များနှင့်ထို့ထက် ပို. များ၏ဆင်တူအသွင်အပြင်အတွက်တည်ငြိမ်သေးငယ်တဲ့ဖနောင့်နှင့်အတူဖိနပ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များပိတ်ထားသည်။
အဆိုပါ Demi-ရာသီကာလရှေ့မှောက်မှဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အမြိုးမြိုးလာကြလိမ့်မည် ပလက်ဖောင်းဘွတ်ဖိနပ် , ပြင်ဆင်ပြီးသုံးသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်ဖနောင့်။ မိန်းကလေးများများ၏ရှေ့မှောက်၌ချမ်းရာသီအတွက်ထူးထူးခြားခြားကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုဖွင့်လှစ် - နွေးများနှင့်အဆင်ပြေ ugg ဘွတ်ဖိနပ်မှာသဘာဝနှင့်အတုအမွေးတွေနဲ့အလှဆင်စတိုင်များနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုး, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်၏ပန်းသို့မဟုတ်ပုံစံနှင့်အတူဣတ္ဘွတ်ဖိနပ်, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများလုပ်ထားတဲ့ဖိနပ်။
ဖက်ရှင်ဖိနပ် Demi 2018
ရာသီသစ်အတွက်နွေဦးနဲ့ဆောင်းဦးလကြာဖိနပ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ တိုင်းဖက်ရှင်ဥပမာအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ option ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တင်ဆက်သူအပေါင်းတို့ကိုအကွာအဝေးများထဲတွင်:
ကွဲပြားခြားနားသောတိရစ္ဆာန်များ၏ animalistic ပုံနှိပ်နှင့်အတုသားရေနှင့်အတူဖက်ရှင်အမျိုးသမီးဖိနပ်နွေဦး 2018 အမှန်တကယ်ထိခိုက်ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်, အလုပျအတှကျမထိုက်မတန်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီဇိုင်းရှိခြင်း, နှင့်အအေးရာသီ၌ကျင်လည်ခြင်းငှါ၎င်း,
ဖက်ရှင်ဖိနပ် - နွေရာသီ 2018
ပူပြင်းရာသီအတွက်မျှော်, stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများဖက်ရှင်မော်ဒယ်, စတိုင်များနှင့်အရောင်ထူးထူးခြားခြားကျယ်ပြန့်သည်ဘုန်းအသရေပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ retro မော်ဒယ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်သို့သော်အချို့ထုတ်ကုန်ဒီနှစ်လုံးဝခေတ်မမီတော့ကြည့်ရှုပါ။ သစ်တောက်တောက်နှင့်မူရင်းတစ်ခုခုသို့ဆောင်ခဲ့ပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်ရှေ့မှာသက်ဆိုင်ရာခဲ့ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖိနပ် - ဒါဟာမကြောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖိနပ်, နွေရာသီ 2018 အဓိကအားဖြင့်အောက်ပါ options များကကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်:
ဒီနှစ်ပါတီများနှင့်ပွဲတော်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်လည်းနေ့စဉ် wear ထဲမှာမသာလက်ခံနိုင်သောအရာတောက်ပနေ။ Dolce & Gabbana, ခရစ်ယာန် Dior, Gucci, Calvin Klein နဲ့သူတို့ရဲ့သစ်ကို collection များကိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်တောက်ပထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြော့ဖိနပ်ပေးအပ်သို့မဟုတ် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်သို့မဟုတ်တောက်ပနေဖြင့်အလှဆင်;
ရှေ့တန်းဖို့ပူရာသီအတွက်အစဉ်အမြဲပန်းပုံနှိပ်နှင့်အတူချစ်စရာကောင်းထုတ်ကုန်သွားပါ။ 2018 ခုနှစ်, collection များကိုအလက်ဇန်းဒါး McQueen က, D ကို & G အတွက်ကိုယ်စားပြုပန်းပုံနှိပ်သို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်အတူဖက်ရှင်ဖိနပ် godu အဲလစ် + Olivia နှင့်ဒါ;
ယေဘုယျအားစိတ်အားထက်သန် retro စတိုင်များ၏နောက်ခံဆန့်ကျင်နေတဲ့စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကျယ်ပြန့်ဒေါက်ဖိနပ်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များဖိနပ်များနှင့်ခြေနင်း ဖြစ်. ,
2018 ခုနှစ်တွင်ချွန်ခြေချောင်းတွေနဲ့အသစ်အခြေချဖက်ရှင်ဖိနပ်၏ကျော်ကြားမှုရဲ့ထိပ်မှာ။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များ Prada, Valentino, တွမ် Ford ကား, Gucci နှင့်အခြားနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုထင်ရှားပြီ
ထို့အပြင်ယခုနှစ်အဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေဖိနပ်ကအရမ်းကျေနပ်ချစ်သူများအတွက် stylist - ဖက်ရှင်ဖိနပ်နောက်တဖန်အမြင့်3စင်တီမီတာအကြောင်းကိုအနည်းငယ် pointy ဒေါက်ပေါ်သွား၏။
အသီးအသီးရာသီနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိသိသာသာကွဲပြား, ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်နေချင်သူမိန်းကလေးများသည်ကိုသင်ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဖိနပ်ဒီနှစ်အများအားဖြင့်, အပျော့စားသက်သာနှင့်အဆင်ပြေသည်ဆိုပါက, လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်, stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများအဓိကအားဖြင့်သူမ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အာရုံပေးဆောင်ကြပါပြီ, ဒါထွက်ပေါ်လာသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအဆင်မပြေစေနိုင်ဘူး။
ဤအတောအတွင်းက 2018 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ဖိနပ်, တောက်ပအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ဖော်ပြမကြည့်ဘူးမဆိုလိုပါ။ ဣတ္နှင့်ချစ်စရာကောင်း - မတူဘဲ, အဆင်းလှသောလိင်တစ်ဦးစီအဘို့အလူကြိုက်များရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကြားသူမအဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရနှင့်ကြည့်ရှုမည်သည့်အတွက်တဦးတည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဣတ္နှင့် seductive - လှပသောအမျိုးသမီးများအတွက်အများဆုံးဖက်ရှင်ဖိနပ်အမြဲအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ silhouette အသွင်ပြောင်းသောတစ်ကြော့ဖနောင့်ရှိပါတယ်, သူမ၏ခြေထောက်ပါးလျသောတင်ပါးနှင့်တင်ပါးရှည်ဖြစ်ကြပြီး။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ မြင့်သောဖနောင့် ကိုအမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဒါမကြာခဏအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်ကလပ်ပါတီများတွင်တွေ့သောပါးလွှာသော pin ကို, နီးပါးအမြဲအလတ်စားအမြင့်တစ်တည်ငြိမ်ဖနောင့်ဖို့လမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ထို့အပြင်လူကြိုက်များထိပ်မှာပထမဦးဆုံးရာသီအမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစား၏ဖန်စီဒေါက်နှင့်အတူဖက်ရှင်ဖိနပ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူသိများ stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများတစ်ဦးတယော, စပျစ်ရည်ကိုမျက်မှန်, နှလုံးနှင့်ပိုပြီး၏ပုံစံဒေါက်နဲ့မော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဖိနပ်များနှင့်ခြေနင်း, ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်, ဖိနပ်နဲ့တောင်ဖိနပ် - ယနေ့, သူ့ဖိနပ်အပေါ်လုံးဝဖိနပ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ၏ဝါသနာရှင်စင်စစ်သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်နေ့နေထိုင်နိုင်သည့်အတွက်တစ်ဦးဖက်ရှင်အပြားဖိနပ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်နေ့စဉ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအားကစားသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်တွေဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ Sneaker နှင့်ဖိနပ်, Sneaker နှင့် - ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်အားကစားဖိနပ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်နေကြသည် slipony ။
ဖက်ရှင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်စုံတွဲ့ Olympus တစ်ပွင့်လင်းဖနောင့်နှင့်ပိတ်ထားတဲ့ခြေချောင်းအားဖြင့်ခွဲခြားထားတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ဖိနပ်, လား, ထင်ရှား။ , ကနဦးကဤမော်ဒယ်များ Gucci နှင့် Miu Miu ၏ collection များကိုထင်ရှားပေမယ့်လည်းဒီနေ့သူတို့အကျော်ကြားဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အကွာအဝေး၌ရှိကြ၏။ အလွန်ဣတ္နှင့် seductive ကျန်ရှိသောနေစဉ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နှစျသိမျ့နှင့်ဖိနပ်၏စတိုင်အသွင်အပြင်အားဖြင့်အထင်ကြီးအချို့မင်းသမီးတောင်မှအိမ်မှာကြောင့်၌ကျင်လည်ဆက်လက်။
ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်တစ်ဦးအနိမ့်ပြေးမှာဖက်ရှင်နဲ့ဖိနပ်၏အခြားအမျိုးအစားများအမျိုးသမီးတွေကမ်းလှမ်း - ဖိနပ်-ချယ်လ်ဆီး, တောက်ပခြင်းနှင့်မူရင်း Lofer, loafers, Oxford, brogues နှင့်ပိုပြီး။ အဆင်းလှသောလိင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏နွေရာသီမှာတော့ပတ္တူ၏ဖန်ဆင်းနှလုံးသားများနှင့်အဆင်ပြေပာ, ဒါမှမဟုတ်သာမန်လှန်လာသောသေတ္တာ, espadrilles နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့ပါးတဲ့, အောင်နိုင်။
ပလက်ဖောင်းပေါ်ဆောင်းပါးများတစ်သေးသေးလေးဖက်ရှင်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးအပ်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်မိမိတို့သဘာဝအလျောက်အားနည်းချက်များကို၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနေသောအသေးစားအရပ်ငယ်ရွယ်မင်းသမီး, ကရွေးချယ်နေကြတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒေါက်ဖိနပ်နှင့်အတူဖိနပ်မတူဘဲပလက်ဖောင်းပေါ်မော်ဒယ်လ်အီဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးနှင့်မိန်းကလေးရဲ့ကျောဘက်မှာတိုးပွားလာဖိအားပေးကြပါဘူး။ ဒီမျိုးစိတ်အမြင်အာရုံတိုးတက်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့်လည်းရေခဲမျက်နှာပြင်များပေါ်မှာလုံခြုံချုပ်ကိုင်ထားပေးပါသည်ဖြစ်ပါတယ်သာတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မြင့်သောဖိနပ်များနှင့်ခြေနင်း, ဒါပေမယ့်လည်းဖက်ရှင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖိနပ်မသာဖြစ်ကြသည်။
တုံးအဖနောငျ့ဖို့အဆင်ပြေအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောနှင့်အတူဖက်ရှင်အမျိုးသမီးဖိနပ် wear စဉ်နှင့်အမြင်အာရုံခြေထောက်ကြက်သူတို့ကိုသိသိသာသာပိုမိုပါးလွှာစေသည်တစ်ချိန်တည်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ခြေနင်းပြင်ဆင်ပြီးသုံးနှစျသိမျ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရရန်နှင့်အခြားသူများမှအခဲနှင့်ကြော့ရှင်းသရုပ်ပြဖို့လိုအပ်သူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိန်းမ, ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်ရှိထုတ်လုပ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Sneaker သို့မဟုတ် Sneaker အဖြစ်ဖက်ရှင်လူငယ်ဖိနပ်အပေါ် - ဤထုတ်ကုန်စတိုင်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဿုံအားကစားနှင့်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ် ပေါ့ပေါ့၏စတိုင် ။
အဆင်ပြေနှင့်ဖက်ရှင်အားကစားအမျိုးသမီးဖိနပ်တိုင်းလှပသောအမျိုးသမီး၏ဗီရိုထဲမှာဖြစ်သင့်သည်။ ခေတ်သစ်မင်းသမီးအားကစားနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းနေ့စဉ် wear အဘို့မသာအသုံးပြုကြသည် - လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားကစားလမျးညှနျခပိုကောင်း stylist စွမ်းဆောင်ရည်စဲဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပုံစံမျိုးပိကြသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Sneaker, ဖိနပ်များနှင့်အခြားမော်ဒယ်တစ်ဦးတည်းသော၏မျက်နှာပြင်မှကော်တိုးတက်ကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ခြေထောက်အတော်လေးပင်ပန်းဖြစ်ကြသည်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ, လှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များအစိုဓာတ်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုအနေဖြင့်သင်၏ခြေကိုကာကွယ်ပေးသည်သောမိန်းမတို့အဘို့ဖက်ရှင်ရော်ဘာဖိနပ်ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်နှင့်တစ်ဦးအပြားဝါး, ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ဒါမှမဟုတ်ဒေါက်နဲ့ခြေကျင်းအဆင်ပြေနှင့်ပိတ်ထားသောဖိနပ်အပေါ်မူကွဲဖြစ်သောအကြားဘွတ်ဖိနပ်များ၏မော်ဒယ်များ, အမျိုးမျိုး။ ခေတ်သစ် stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများပင်တီထွင်ခဲ့ကြ ခြေနင်း လုံးဝရော်ဘာကိုဖန်ဆင်း, Sneaker နှင့် slipony - ဤအရာအလုံးစုံမော်ဒယ်များအလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နွေရာသီမိုးရာသီနေ့ရက်ကာလအဘို့အထူးဒီဇိုင်းနေကြသည်။
အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာသို့မဟုတ်ရေကန်မှအားလပ်ရက်အပေါ်စေလွှတ်အဖြစ်နွေရာသီရာသီမှာတော့ကမ်းခြေများအတွက်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များဖိနပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတို့အဘို့ဖက်ရှင်ဖိနပ်, အကမ်းနားအပေါ်အချိန်ဖြုန်းအောက်ပါမူကွဲများတွင်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်:
flops - မိမိလက်ချောင်းများအကြား link တစ်ခုနှင့်အတူမော်ဒယ်;
Dianet - ကြီးတွေခြေချောင်းပတ်ပတ်လည်လက်စွပ်တစ်ကွင်းနှင့်အတူထွက်ပစ္စည်း,
ခုံဖိနပ် - ဖိနပ် PVC perforated;
အလွန်အမင်းအပြည့်အဝခြေထောက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများကတစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်သင့်လျော်တဲ့ရွေးချယ်မှုများ, ရှေးခယျြဖို့အလွန်လွယ်ကူမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအတောအတွင်း stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများနှစ်စဉ် appetizing ပုံစံများနှင့်အတူအမျိုးသမီးမော်ဒယ်အမျိုးမျိုးဖွံ့ဖြိုး။ အောက်ပါမူကွဲကိုယ်စားပြုအပြည့်အဝခြေထောက်နှင့်အတူမင်းသမီးများအတွက်ဒီတော့ပေါ့ပေါ့ဖက်ရှင်ဖိနပ်:
တစ်ဦး rounded နှာခေါင်းနှင့်အတူ 5-7 စင်တီမီတာတစ်ဖနောင့်အမြင့်နှင့်အတူတရားရုံးဖိနပ်;
ရှေ့မှာရှိတဲ့ကြီးတွေခါးပတ်နှင့်အတူမော်ဒယ် - ဤအသေးစိတ်အကြီးအကျယ်ခြေဆစ်ကနေအာရုံကိုအာရုံပျက်လျက်ရှိ၏
အသက်ကြီး, အမျိုးသမီးအများစုအနက်ရောင်နှင့်အညိုအရောင်အဆင်း, အသံပိတ်ထားခေတ်မှီအဆင်ပြေဖိနပ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်အတွင်းရှိလှပသောအမျိုးသမီးအလုပ်လုပ်ရန်, က fit မှအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် တရားရုံးဖိနပ် ဆောင်းတွင်းရာသီ, အရပ်ထဲမှာ5စင်တီမီတာ၏တည်ငြိမ်ဖနောင့်ပေါ် - နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွားသငယ်ကိုမှတက်နွေးဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအဘို့ - ပိုလျှံမရှိဘဲပါးလွှာပိတ်ထည်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းပြီးစုံစုံခြေနင်းကိုဖန်ဆင်းဖိနပ်အပိတ် ပုံစံမျိုး။
Dutuyu အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
မဟော်ဂနီ - အဘယ်အရာကိုအရောင်ရသနည်း
မိုးပြာရောင် slipony ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
တောက်ပတဲ့အပြာရောင်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Mom, များအတွက်ကျောင်းကပွဲမှဝတ်စားဆင်ယင် - အမှားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လို?
မိုးပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Justin Bieber ကိုတကိုယ်လုံးအပေါ်တစ်ဦးတက်တူးထိုးရှိပါတယ်
Keanu Reeves နဲ့သူ့ရည်းစား 2015
ကိတ်မုန့် "Creme brulee"
နွေဦးစုဆောင်းမှု 2013 Chanel မိတ်ကပ်